Umfula unyamalala ngezinsuku ezine nje | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-River Slims iyanyamalala ngezinsuku ezine nje kuphela
Kwesinye isikhathi imvelo ingasimangaza ngenani lezinto ezingajwayelekile nezingachazeki ezikhona. Izindawo ezibonakala zithathiwe ezindabeni, izinto ezingeke zichazwe ngisho nayisayensi. EMpumalanga kunjalo ngomfula iSlims, protagonist wento engachazeki nengavamile eye yenzeka emlandweni wethu wakamuva kakhulu.
Kuze kube manje, akukho lutho olubaluleke kangaka olubhalwe phansi. Futhi lo mfula usomile futhi wanyamalala esikhathini esiyizinsuku ezine. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi lokhu kwenzeke kanjani futhi kungani?
1 UMfula iSlims
2 Ukubanjwa komfula
3 Kungani lokhu kwenzeke?
Lo mfula usenyakatho yeCanada futhi phakathi namakhulu eminyaka ubulokhu uhambisa amanzi ancibilika ubheke enyakatho. Amanzi ageleza esuka eKaskawulsh Glacier endaweni yaseYukon Territory yaseCanada aya emfuleni iKluane, abese eqhubekela olwandle iBering. Kepha yilokhu okuvame ukwenzeka. Noma kunjalo, Le ntwasahlobo yangaphambilini ka-2016 kwenzeke isimanga esishintshe yonke into.
Mhlawumbe, ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke, isikhathi sokuncibilika okukhulu kweqhwa selikhuphukile futhi lokhu kudale ukuthi indawo lapho umfula ugelezela khona ithambekele emfuleni wesibili oqondisa kabusha amanzi abheke eGulf of Alaska, etholakala izinkulungwane zamakhilomitha ukusuka ku-trajectory yoqobo.
Ebhekene nalesi simo, kutholakele ukuthi amanzi omfula ehle kakhulu, phakathi kukaMeyi 26 no-29, 2016. Babhekene nalesi simo, bafuna ukwazi ukuthi wonke lawo manzi ashonephi futhi ahlaziywa kusetshenziswa amadroni futhi indiza enophephela emhlane. Kumangaze umphakathi wesayensi, Icala lokuthi kunyamalale umfula ngezinsuku ezine nje kube ukubanjwa komfula. Le ndlela ibizwa kanjalo engakaze ibonwe ngaphambili emlandweni.
Lesi simo ngumcimbi we-hydrographic oqukethe ukuguguleka komhlaba okwenziwe ngamanzi omfula omkhulu kangangoba uyakwazi ukuvula igebe esiteshini somunye umfula, ngaleyondlela uthumba amanzi awo futhi uwashiya engahambanga. Into ehlaba umxhwele ngalesi simo ukuthi ubufakazi obungokomlando balolu hlobo lwesimo buphakamisa ukuthi kuthatha izinkulungwane zeminyaka ukuguguleka ngokwanele ukudala le nqubo. Kodwa-ke, kulokhu kwenzeke ngezinsuku ezine kuphela.
Abaphenyi baya eMfuleni iSlims ukuthola ukuthi kungani le nto yenzeke eYukon ngo-Agasti 2016. Isimanga lapho, lapho sifika emfuleni, ovame ukuthwala ukugeleza okungaba ngamamitha angama-480 ububanzi, wawusunyamalele.
Ngokusho kukaJames Best, isazi sokuma komhlaba e-University of Illinois, lokhu okulandelayo kwenzeka:
Saya kule ndawo ngenhloso yokuqhubeka nokukala kwethu kwi-River Slims, kepha sathola ukuthi umbhede womfula usomile kakhulu. Phezulu kogu lolwandle esasikulokhu sihamba ngesikebhe esincane manje kwakuyisiphepho sothuli. Mayelana nokushintshwa komhlaba kwakumangalisa ngendlela emangalisayo.
Lesi simo saqeda konke ukugeleza koMfula iSlims, kodwa-ke, okuphambene kwenzeka kuMfula i-Alsek. Ngokumunca konke ukugeleza kwamaSlims, eyakhe yanda kakhulu.
Kungani lokhu kwenzeke?
Ukuze kuchazwe into enkulu kangaka enjengale, kwenziwa izifundo enkundleni futhi zonke zifinyelela esiphethweni esifanayo: ziyathinteka ngokuguquka kwesimo sezulu. Ukukhuphuka kwamazinga okushisa omhlaba kanye nokuhlehla okulandelayo kwezinguzunga zeqhwa kudale isikhathi sokuncibilika okukhulu nokubholwa kwesiteshi esisha eqhweni. Leli qiniso yilo eliqondise ukugeleza kwamanzi kuya ngaseningizimu emfuleni iKaskawulsh.
Lokhu kusho ukuthi esikhundleni sokugcina oLwandle iBering ngeLake Kluane, amanzi ancibilikayo manje asebenzela ohlangothini oluseningizimu-mpumalanga futhi ekugcineni afinyelele olwandle iPacific. Inguquko enkulu, hhayi nje ngoba kungokokuqala ukuthi ukuthunjwa komfula kwenzeke ngokushesha okukhulu, kepha ngoba kunjalo icala lokuqala lapho ososayensi bacabanga ukuthi le nto yenzeke ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu okwenziwe ngabantu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-River Slims iyanyamalala ngezinsuku ezine nje kuphela
Izinguzunga zeqhwa zase-Arctic: kusuka ekubukekeni kwemvelo kuya emanzini asemabhodleleni
Enye yezinguzunga zeqhwa ezinkulu eGreenland ine-crevasse eerie